( ခေတ်သစ် သီတာဒေဝီဇာတ်လမ်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( ခေတ်သစ် သီတာဒေဝီဇာတ်လမ်း )	16
( ခေတ်သစ် သီတာဒေဝီဇာတ်လမ်း )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Aug 20, 2015 in Creative Writing, Poetry | 16 comments
သီတာဆိုတာ ရာဇဝင်မှာ ငါအရင်တွေ့ဖြစ်
အသာနားပါ ရာမရယ် နုပျိုခြင်းမယ် မင်းအသာရနိူင်ပေမယ့်
ရုပ်ဆိုးတဲ့ ဒဿမှာလည်း ချစ်တတ်တဲ့ အသည်းပါသလို
ရာဇဝင်ကို အတိတ်မှာထား ဘယ်နည်းများနဲ့ ပြိုင်မလဲ ?
သွေးနဲရင် နောက်ဆုတ် ညှာမှာမဟုတ်တဲ့ အချစ်လုပွဲ
ပစ်လုဆဲဆဲ သေနတ်ပြောင်းဝ နှောင်းနောင်တ မလာခင်
နှစ်ကိုယ်တူညီမယ့် ကိုယ်တို့ရဲ့ အချစ်တိုင်းပြည် ။
Alinsett @ Maung Thura says: ဟိုက် ရှားးးးဘားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး မိုက် (စ) !!!!
မြစပဲရိုး says: အချစ်ကဗျာ လို့ မမြင်ဘဲ ဒီ နေ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း ကို ဘဲ မြင်မိနေတာ ကျွန်မ အလွန်လား ကိုမျိုး။
lol:-))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အရီးနော်
ရိုးရိုးအချစ်ကဗျာလို့ မှတ်ပါနော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3919
weiwei says: မယ်သီတာခိုးတာ ဘယ်သူလဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကိုမျိုး :-)))
ဟေသီ says: အလန်းစားပဲ…. မိုက်ပါ့
တောင်ပေါ်သား says: အလင်းဆက် ၊ မမချွိ ၊ အရီး ၊ မဝေ ၊ ဟေသီ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရာ မ ရာမ ဆိုတော့ ဗိုလ်အောင်ဒင် ထဲက ရာမ ကို သတိရသွားပြန်ရော
ဦးကျောက်ခဲ says: ကိုဂျီးမြိုးရဲ့ ဒီကဗျာကို အတော်ကြိုက်တယ်ဗျာ…
အရင် အခြစ်ကဗျာတွေထက်စာရင် စဉ်းစားစရာအပြည့်…
စာသားမှာ နာကြည်းချက်တွေနဲ့ ခွန်အားကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရတယ်…
အင်း… ဒဿ … သင်းမှာ သေနတ်ရှိရင် လေးတင်ပွဲတောင် ဝင်ပြိုင်စရာမလို…
တောင်ပေါ်သား says: ကျုပ်က ခဏ ခဏ ဒဿဖြစ်နေရသလိုပဲဗျာ
ဒါကြောင့် ပေါက်ကွဲတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: အချိန်တန်ရင် အဖြေထွက်မှာပါ…
ပေါက်လည်းမကွဲနဲ့… ပေါက်လည်းမခွဲနဲ့… ခိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14449
kai says: ရာမဇတ်ထဲ.. သေနတ်ပြောင်းကြီးတထောင်ထောင်…
ဒါလည်းပဲ..အနုပညာထင်ပါ့….။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2389
aye.kk says: ကေါင်းလိုက်တဲ့”ကဗျာ”အသားပါပါမို့ 
Mike says: .သေနပ်ရှိသူနိုင်စတမ်းခေတ်မဟုတ်ပါလား
တောင်ပေါ်သား says: ကိုကျောက်ရေ
သဂျီးလည်း အရီးလို ဇွတ်ပဲ ၊
အင်းပါလေ ၊ ကြိုက်သလိုတွေးစေဗျား အန်တီအေးရေ